[OFISIALY] dr.fone Toolkit - Android Lock Screen fanesorana ny PIN, Password, tondro & Pattern
Esory Android lamba hidin-trano tamin'ny 5 minitra.
Esory 4 efijery hidin-trano karazana - lamina, PIN, teny miafina & dian-tanana amin'izany.
Hidin-trano ihany no hanala ny lamba, tsy misy rakitra very mihitsy.
Tsy misy teknolojia fahalalana ilaina, ny olona rehetra dia afaka hiatrehana izany.
Miasa ho an'ny Samsung Galaxy S / Fanamarihana / Tab andian-dahatsoratra, ary LG H2 / H3 / H4, sns
Tsy maninona ianao nanadino ny teny miafina eo amin'ny Android hidin-trano lamba na vao mahazo faharoa-tanana fitaovana, ary tsy fantatro ny hidin-trano lamba ny passcode, io Android Lock Screen Removal mahatonga anao ho afaka hanary ny tsy fantatra passcode tamin'ny 5 minitra, anisan'izany ny lamina, PIN, tenimiafinao sy ny tondro. Na inona na inona ny passcode misafidy ianao, dia tsy ho very izay tahirin-kevitra eo amin'ny fitaovana amin'ny alalan'ny fanesorana azy amin'ny Android ity Lock Screen fanesorana.
Mihidy ny Android Device?
Esory Android Lock Screen in-javatra samihafa
Nanadino ny teny miafina rehefa avy mametraka azy io, ela be talohan'ny
Nahazo faharoa-tanana amin'ny fitaovana Android mihidy efijery
Ny tenimiafina dia napetraky ny ankizy na ny olon-kafa
Ny lamba dia mihidy noho ny hiditra diso tenimiafina ho an'ny imbetsaka
Tsy miditra ny tenimiafina tapaka noho ny efijery
Maro ny toe-javatra toy izany.
Esory Lock Screen amin'ny Android
afaka manala zavatra efatra karazana ny lamba hidin-trano: lamina, PIN, tenimiafina & ny dian-tanana
Esory Android Lock Screen amin'ny No Data Loss
Hidin-trano io Android lamba fanesorana ihany no manala ny lamba mihidy amin'ny fitaovana Android. Ary tsy hanova na very izay fanazavana teo amboniny.
Miaraha miasa amin'ny Samsung Nanaovana sy ny LG Fitaovana
Hidin-trano fanesorana ity fahitalavitra ho an'ny Android asa lehibe ho an'ny ankamaroan'ny Samsung sy LG fitaovana. Azonao atao ny manamarin ny lisitra eto .
Tsy manana ahiahy, mampiasa
Tsy mila hahafehy fahaiza-manao amin'ny solosaina na zavatra sarotra. Connect ny fitaovana Android, ary mihazakazaka io hidin-trano fanesorana efijery. Dia ianao ihany no mila manao tsindry iray, ary toy izany tsotra.
Hidin-trano io fahitalavitra ho an'ny Android fanesorana tanteraka rindrambaiko no namaky-rindrankajy ihany. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana na eo amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
Esory 4 Karazam-Android Screen Lock
tsy misy Data Loss
Izany Android Lock Screen Removal Afaka manaisotra passcodes ny lamina, PIN, tenimiafinao sy ny tondro. Rehetra afaka hanazava izany. Tsy mangataka ny fahalalana tsy teknolojia. Na inona na inona ny tenimiafina dia ianao, dia tsy ho very izay tahirin-kevitra eo amin'ny fitaovana Android. Amin'izao fotoana izao, dia miasa ho an'ny ankamaroan'ny Samsung finday sy ny takela-bato. Marika hafa avy tsy ho ela ireo.
Esory ny mihidy ao anatin'ny 5 minites lamba ao an-trano.
Ianao no hany olona izay afaka mampiasa ny tahirin-kevitra sy kaonty
Tsy misy teknolojia fahalalana takiana amin'ny rehetra.
Tsy very na inona na inona eo amin'ny fitaovana.
1 GB na mihoatra
Miasa tsara amin'ny Samsung fanamarihana, mahita ny zavatra rehetra, fa mila manana olana amin'ny S3 Mini
Mila izany ratsy! Awesome!
Izany \_ 's tokoa no ilaiko. Ianao namonjy ny tahirin-kevitra sy namaha ny olana ... lehibe!
Awesome! Nahaleo ny sarany.
Notsapaina Android indrindra rindrambaiko, Wondershare ihany dia afaka manao ny asa tsy misy olana. Misaotra!
9 Fomba Bypass Samsung Lock Screen
Ahoana no mba hamaha Samsung Galaxy S3
Izay tokony hatao raha toa ianao mihidy avy ao amin'ny finday Android
Ahoana no mba hamaha Android Phone tsy PIN
Fomba Efatra hamaha / Bypass Android Pattern Lock
3 Fomba Samsung Galaxy hamaha S5
Ahoana no Hanova Lock Screen Wallpaper amin'ny Android
Asehoy ny fomba Wi-Fi Password amin'ny Android